Mayelana Martech Zone | Martech Zone
Konke kwaqala njengeqembu lezincwadi.
Yebo, ngizimisele. Ngaqala umsebenzi wami kuwebhu ngaphezu kweminyaka engamashumi amabili edlule. Isiza sami sokuqala kwakuyisiza esibizwa ngokuthi yiHelping Hand esalungisa amasayithi amahle kakhulu asuka kuwebhu ukusiza abantu ngamakhompyutha abo nangezinsiza zokuzulazula kwi-Intanethi. Eminyakeni eminingi kamuva ngathengisa isizinda enkampanini eyasiza abantu ukuthi bayeke ukubhema, enye yokuqala yami big izinkontileka.
Ngiqale ukubhloga ku-blogger futhi ngafaka inkondlo ngakho konke kusuka kwezepolitiki kuya kumathuluzi we-Intanethi. Bengigcwele yonke indawo futhi ngizibhalela kakhulu - ngaphandle kwezilaleli eziningi. Ngangiyilungu lekilabhu lezokumaketha e-Indianapolis elaphuma ngokushesha kungalawuleki. Ngokuhamba kwesikhathi, ngithole ukuthi abaningi ngokwengeziwe beqembu beza kimi ukuthola izeluleko zobuchwepheshe. Ukuhlanganiswa kwesizinda sami sobuchwepheshe nobuchule bebhizinisi lami nokumaketha kwakudingeka kakhulu njengoba i-Intanethi yaletha ushintsho ngokushesha embonini.
Ngemuva kokufunda Izingxoxo Ezinqunu, Ngangikhuthazekile ukuba ngibe nomkhiqizo ongcono futhi ngilawule okuqukethwe kusayithi. Bengifuna nokulawulwa okwengeziwe ekubukekeni nasekuzweleni kwebhulogi yami, ngakho-ke ngathuthela kusizinda sami, i-dknewmedia.com, ku-2006 futhi ngakha isiza sami sokuqala se-WordPress. Njengoba ngangigxile kubuchwepheshe bokumaketha, bengingafuni ukuthi isizinda esinegama lami singene endleleni, ngakho-ke ngithuthele isiza (kabuhlungu) kusizinda saso esisha ngo-2008 lapho sikhule khona kusukela lapho.
The Martech Zone liphethwe futhi liqhutshwa ngu Highbridge, i-ejensi engiyiqale ngo-2009. Ngemuva kokusebenza cishe nayo yonke iminyango emikhulu yezokukhangisa online ngesikhathi sami e-ExactTarget futhi ngiqala Ukuhlanganiswa, Ngangazi ukuthi kunesidingo esikhulu sobuchwepheshe bami nokuholwa ngaphakathi kwemboni eyinkimbinkimbi kangako.
Highbridge inkampani yami ephethe ukushicilelwa kwami, ama-podcast, ama-workshops, ama-webinars, nama-gigs okukhuluma. Highbridge eyami I-ejensi ye-Salesforce Partner lokho kusiza izinkampani ukukhulisa utshalomali lwazo kwimikhiqizo ye-Salesforce neMarket Cloud. Sinikeza ukuhlanganiswa, ukufuduka, ukuqeqeshwa, ukubonisana ngamasu, kanye nentuthuko yangokwezifiso.
Ngiyabonga kakhulu ngokungeseka kwakho kule minyaka edlule!
The Martech Zone isingathwa ngokuziqhenya ngu UFlywheel uphathe ukusingathwa kweWordPress futhi siyinhlangano ephethwe.